Kulan xasaasi ah oo u socdo Farmaajo, Sheekh Shariif & Xasan Sheekh – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Waxaa Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya ka bilaawday kulan xasaasi ah oo u dhaxeeya Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxweynayaashii hore ee Somalia ee Sheekh Shariif & Xasan Sheekh Maxamuud, kulankaas oo ahaa mid horay lo sii shaaciyey.
Maalmo ka hor waxaa Muqdisho kulan ku yeeshay taliyaha NISA Fahad Yaasiin, Sheekh Shariif iyo Xubno kamid ah Madasha Xisbiyada Qaran,waxaana kulamadaas lagu go’aamiyey kulanka Maanta.
Guud Xisbiga UPD Xildhibaan Axmed Macalin Fiqi oo kulanka goobjoog ka ah ayaa soo bandhigay Shan qodob oo xasaasi ah oo kulanka looga hadlayo.
Hoos Ka Akhriso qodoboda looga hadlayo kulanka.
1: Dastuurka iyo shuruucda dalka In ay saldhig u noqdaan habdhaqanka iyo hawlaha dawladda, ayna tahay in la ilaaliyo, oo aan dalka loo horseeedin fowdo iyo nidaam kalitalis ah.
2: Doorashooyinka iyo arrimaha ku geydaaman oo mugdi badan ku jiro In umadda loo caddeeyo, dalkana ay ka dhacdo doorasho daahfuran oo dastuurka dalka waafaqsan.
3: Khilaafka dawlad goboleedyada iyo dawladda dhexe In xal degdeg loo helo, si doorashooyinka dalku ay waqtigooda ugu qabsoomaan.
4: Gobolka Banaadir iyo dadkiisu In ay xuquuq u yeeshaan In ay maamulkooda soo doortaan, isla markaana hadda laga dulqaado ciriiriga iyo dhagxaanta cuuryaamiyey ganacsiga iyo dhaqaalaha dadka.
5: In laga garaabo gaboodfalladii lagula kacey madaxdii hore ee dalka ee shuruucda dalka hareer marsanaa.
Kulanka u dhaxeeya Madaxweyne farmaajo iyo Madaxda Madasha xisbiyada ayaa yimid, kadib markii dhawaan uu kulan dhex-maray Xubno kamid ah Madasha iyo taliyaha NISA Fahad Yaasiin.